Ayaa doonaya inuu xakameeyo internetka? | Laga soo bilaabo Linux
Dhawaan maqaal by Violet Blue loogu talagalay Qashinka Tech lagu daabacay Zdnet, wuxuu na ogeysiinayaa, Isniinta soo socota, Midowga Isgaarsiinta Caalamiga (ITU), oo ah hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan isgaarsiinta, inuu ka bilaaban doono magaalada Dubai Shir Caalamiya oo ku saabsan Isgaarsiinta Caalamiga ah (Shirka Caalamiga ah ee Isgaarsiinta Caalamiga ah). ), kaas oo jiri doona kalfadhiga, albaabada uxiran, ilaa 14. Shirkaan, waxaa loogu talagalay in lagu gaaro heshiis ku saabsan dib u eegista la soo jeediyay ee Xeerarka Isgaarsiinta Caalamiga ah (ITR), iyadoo ujeedadu tahay in la balaariyo baaxadeeda kormeerida iyo nidaaminta internetka aan maanta naqaan.
Runtii waa hubaal inaadan waxba ka maqal shirkan, maxaa yeelay si ka duwan inta kale ee lagu qabtay hoostaga Qaramada Midoobay, ma ahayn ujeeddada wax dallacsiineed ee warbaahinta, xitaa kuwa ka hooseeya hay'adani. caalami ah. Tani ma ahan wax iska yimid, tan iyo markii laga soo bilaabo wareegyadii ugu horreeyay ee wada-xaajoodka, waxaa la isku dayay in laga ilaaliyo sida ugu macquulsan baaritaanka dadweynaha, laakiin, nasiib wanaag qof walba, macluumaadka qaar ayaa laga helay sheegashooyinka dowlado gaar ah.
Dukumentiga TD-64 iyo waxa ku jira
In kasta oo si guud u eegista ay umuuqato inay ka buuxdo ujeedooyin wanaagsan, mahadsanid websaydhka WCITLeaks, oo ay abuureen cilmi baarayaal ka socda Jaamacadda George Mason, nuqulkii ugu dambeeyay ee dib u eegista la soo jeediyay ee Xeerarka Isgaarsiinta Caalamiga, oo loo yaqaan dukumiinti TD-64, oo ka kooban, kuwo kale oo badan, soo-jeedimaha soo socda:
Dal xubin ka ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado meesha ganacsigiisa lagu soo rogay wuxuuna xaq u leeyahay inuu ku soo rogo sharci kasta taraafikada su'aasha, sababo nabadgelyo ama inay ka hortagto khayaanada.
Waxay xaq u siineysaa dowladaha xubnaha ka ah inay joojiyaan adeegyada isgaarsiinta caalamiga ah, gebi ahaanba, qayb ahaan iyo / ama nooc cayiman, soo gala, baxa ama socdaal ku taga.
Waxay mamnuucaysaa in la qariyo magaca taraafikada waxayna ka dhigaysaa aqoonsiga dadka isticmaala adeegyada isgaarsiinta mid khasab ah.
Maaha wax aan jirin, dukumeenti kale Waxaa siidaayay WCITLeaks, waxay shaaca ka qaaday in qabanqaabiyayaashu ay diyaarinayaan olole xiriir dadweyne si looga fogaado diidmada in ka badan ee la filayo ee aragtida dadweynaha marka la eego sheegashooyinkaas.
Laakiin waa hagaag, yaa ka dambeeya "xeerarkan" cusub? Ma waxay noqon doonaan tuhmanayaasha caadiga ah ee ay caado ka tahay inay kufsadaan markay tahay ku tumashada xuquuqdeenna shabakadda?
Ka soo horjeedda waxa dad badani filayeen, dhiirrigeliyeyaasha ugu muhiimsan ee shirkan iyo isbeddelada la soo jeediyey ma aha CIA ama Mossad, ee waa dawlado aan lahayn dhaqan aad u wanaagsan marka loo eego helitaanka macluumaadka bilaashka ah. Waxay loola jeedaa, sida Shiinaha iyo Ruushka, oo ay taageerayaan maamullo kale oo wadaaga dano guud marka laga hadlayo xakamaynta iyo xaddidaadda.
Kulan bishii Juun ee sanadkii hore lala yeeshay Dr. Hamadoun Toure, Xoghayaha Guud ee ITU, Vladimir Putin, oo markaa ahaa Raiisel Wasaaraha Ruushka, wuxuu ku dhawaaqay ujeedka Ruushka ee ah inuu si firfircoon uga qaybqaato "sameynta gacan ku haynta caalamiga ah ee internetka iyadoo la adeegsanayo Awoodaha kormeerka iyo kormeerka ITU. '
Wuxuu horeyba isugu dayay kahor, bishii Sebtember 2011, markii ay wada joogeen Shiinaha, Uzbekistan iyo Tajikistan, waxay u gudbiyeen ansixinta Golaha Guud ee Qaramada Midoobay soojeedin loogu talagalay "Xeerka Caalamiga ee Habdhaqanka Amniga Amniga" iyadoo ujeedadu ahayd in la dejiyo "xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah ee jaangoynaya habdhaqanka dalalka ee la xiriira macluumaadka iyo internetka", dabcan, sidii la filayay, iyadoo ay hoos imaanayaan dowladaha isla markaana lagu caddeeyo hadal la sheegayo dimuqraadiyadda ka sarreysa.
Ilaa bishii May ee la soo dhaafay waxaa noo digay mid ka mid ah "aabayaasha" internetka, Vinton Cerf ayaa fikradiisa ku daabacay wargeyska New York Times "Ka dhig Internetku mid furan”(Ka ilaali internetka bilaash), kaas oo uu si sax ah u sharraxay ujeedooyinka shirkan iyo cidda ka dambeysay, iyo sidoo kale halista iyo hanjabaadaha ka dhalan kara ee mustaqbalka u ah shabakadda, kaliya maaha marka la eego luminta xorriyadda ee adeegsadayaasha, haddii aysan sidoo kale ahayn in la waayo qodobka hal-abuurnimada iyadoon xaddidnayn oo lagu gartay horumarka shabakadda tan iyo markii ay abuurtay. Marka la fiiriyo dabeecadda jilicsan ee xaaladan, Cerf wuxuu dalbaday in doodda ku saabsan maamulka internet-ka ay noqoto mid hufan oo u furan dhammaan daneeyayaasha, laakiin qabanqaabiyeyaashu dhego bey ku leeyihiin sheegashooyinkaas.
Ma qaban karaan?
Waqtigan xaadirka ah, waxay umuuqataa in wax walba ay kusii nagaan doonaan ujeedooyinka, sababo dhowr ah awgood; Dhinac, Mareykanka, iyada oo loo marayo a bayaan ay soo saartay Waaxda Arimaha Dibada, codka wakiilkiisa shirka, Danjire Terry Kramer, wuxuu cadeeyay inuu si adag uga soo horjeedo isku day kasta oo lagu doonayo in internetka lagu hoos dhigo Qaramada Midoobay, isla mar ahaantaana, Baarlamaanka Yurub ayaa sidoo kale muujiyay diidmadeeda soo jeedinta.
Dabcan, qaar waxay dhihi doonaan, Mucaaradkan Mareykanku maahan mid caqli gal ah, maxaa yeelay dhamaadka maalinta, waa la fahmi karaa in, qaab gaar ah, internetka uu gacanta ku hayo, tan iyo ICANN (Shirkada Internetka ee loogu talagalay Magacyada iyo Nambarada ama Shirkada Internetka ee loogu talagalay meeleynta magacyada iyo tirooyinka), iyo qaar ka mid ah hay'adaha kale ee la xiriira, waxay hoos yimaadaan maamulka Waaxda Ganacsiga, oo aan hor istaagin ilaa maanta, hawlgalka shabakadda ee heerarka u furan dhammaan.
Dhinaca kale, ITU lafteeda, sida ku xusan bayaannada Xoghayaha Guud, waxay muujisay in nooc kasta oo go'aan ah oo la qaato ay tahay inuu helo taageerada loo dhan yahay ee xubnaheeda oo dhan, maadaama ay tahay nidaamka caadiga ah ee jirka oo aysan tixgelinaynin arrimaha. sida tan waa in loo codeeyaa, maaddaama ay yihiin habab aan loo oggolaan karin ururka dhexdiisa iyo, sida iska cad, oggolaanshahan loo wada dhan yahay waa mid aan suurtagal ahayn xilligan la joogo.
Waxay kuxirantahay dhamaanteen
Hada, sababahani kaligood iskama noqon karaan xayndaab ka dhan ah ujeedooyinka ah in internetka la hoos dhigo dawladaha ama hay'ad loo maleeyo inay tahay mid sare, maadaama kuwa maanta diidan laga yaabo inaysan berri sidaa yeelin oo ay tahay mid inagu wada socota annaga, dadka isticmaala internetka, waxaan xaqiijineynaa inay ahaato mid bilaash ah oo u furan dadka oo dhan.
Taasi waa sababta ay tahay inaan ugu dhiirrigelino soo-jeedinta qaab kasta oo aan ku gaari karno Qaad qaado oo ay dhiirrigelisay Google, oo ay ku qoran tahay “Adduunyada xorta ah oo aan xaddidnayn waxay kuxirantahay Web Web bilaash ah oo aan xadidnayn waa inaysan go’aansan mustaqbalka Internetka si madax-bannaan. Fikirka balaayiinta isticmaale ee adduunka ku nool ee adeegsada internetka waa in lagu tixgeliyaa, iyo sidoo kale kuwa khubarada ah ee abuuray shabakadda oo ilaaliya "
Waxaan horeyba u saxiixay arjiga, waxaan kugu dhiiri galinayaa inaad sidaan oo kale sameyso, hadii aan sii wadno sugida, waxaan halis ugu jirnaa in markaan go'aansano maskaxdeena ay goor hore soo daahdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Ayaa doonaya inuu xakameeyo internetka?
Waa arin aad u dhib badan.
Mabda 'ahaan, aqlabiyadda badan waxay isku raacsan yihiin "ma dooneyno faragelinta dowladda," "waxaan dooneynaa internet bilaash ah," iyo wixii la mid ah. Xitaa waxay si dhakhso leh ula xiriirtaa kiisaska Cuba, Masar ama Suuriya. Qofna kuma aqbali karo faaf-reebka maankiisa saxda ah, ha noqoto internetka ama qaab kale.
Si kastaba ha noqotee, khilaafaadka soo socda ayaa wacaya dareenkeyga: dooddan loo maleynayo "horumarka" ayaa ah mid si cad u furfuran dabeecadda, waxayna u maleyneysaa in dowladaha ay xun yihiin iyo shirkadaha (Google) ay wanaagsan yihiin
Ma dhahayo ogolaada faafreebka Cuba. Laakiin aniga waxay ila tahay in GOBOLADA ay soo dhexgalaan su'aalaha qaarkood ee ay ka qabtaan internetka. Tusaale ahaan, dambiyada kombiyuutarka: xatooyada aqoonsiga, khiyaanada internetka, kufsiga, iwm.
Ugu dambeyntiina, waxaan u arkaa mid xiiso leh in la caddeeyo in XAALADO badan (iyada oo loo marayo maxkamadaha ama tallaabooyin saameynaya bixiyeyaasha Internetka, wakiilladooda ka hor NIC, iwm, iwm) ay horay u soo farageliyeen internetka. Dhinaca kale, internetku xor uma aha sidii la rabay inuu ahaado (ma ahan si sax ah faragelinta dowladaha laakiin badanaa sababta oo ah faragelinta shirkadaha: aan ka fikirno bixiyeyaasha internet-ka ee xayira isticmaalayaasha adeegsada p2p, Google blocking sites, Facebook iyo kuwa kale oo badan oo isticmaala oo xitaa iibiya xogtooda gaarka ah, iwm, iwm, iwm.)
Waxaan aaminsanahay in qawaaniinta internetka ay tahay mid loo baahan yahay iyo xitaa, sidaan sheegay, inay soo bilaabatay waqti hore (in kastoo si xadidan). Si kastaba xaalku ha ahaadee, dhibaatada ayaa ah nooca qawaaniinta la raadinayo: mid guud ahaan la wada oggol yahay (taas oo, mabda 'ahaan, ka dhigaysa "yareyn" dawladaha qaar) ama mid si cad u soo rogaya hegemony-ka Mareykanka (bal aan ka fikirno sida ay hadda u shaqeyso ICANN) .
Yaanan ilaawin in khilaafkani kudhaxeeyo xaalad ah soo saarida dhaqanka hegemonic ee ka timaada Mareykanka iyo Yurub (ka fikir filimada aan daawano ama muusikada aan dhageysaneyno) iyo in internetka ay u arkaan inay yihiin «qatar». Taasi waa sababta ay uga soo horjeedaan qawaaniinta "caalamiga ah" oo ay yiraahdeen wax aan macquul aheyn oo ay ka wada xaajoodeen heshiisyo lagu xakameynayo internetka ka baxsan UN-ka, sida heshiiskii Budapest ee ku saabsanaa dambiyada internetka oo qofka ku xadgudba ku dhowaad la geliyo isla darajada iyo kan muusikada si sharci darro ah u soo dejiso. Halista ayaa ku jirta!
Si kastaba ha noqotee, dhibaatadan marka loo eego "Koonfurta", kaliya Gobollada ayaa fulin kara gorgortankan (oo aan waxtar u lahayn oo keliya qalabka dhaqanka ee Waqooyiga) Gobolladuna waa kuwa keliya ee awood u leh inay adeegsadaan xakamaynta lama huraanka ah si loo hubiyo xuquuqda ku socota muwaadiniinteeda (tusaale ahaan, iyada oo loo marayo Cadaaladda sida aan ku aragnay kiisaskii aan horay u soo sheegay). Dhinaca kale, dhibaatadu waxay tahay in Internetku yahay dhacdo caalami ah oo sidaas darteed, aad bay uga sii dhib badan tahay hirgelinta xeerarkan (aan u maleyno in xogta muwaadin Argentine ah oo dareemaya culeys uu Facebook qabo, aan dhahno, waxay ku jirtaa Mareykanka, maahan Argentina).
Sikastaba, waan tuuray dhowr fikradood oo shaqsi ah laakiin waxaan u maleynayaa inaad waxbadan ama kayar fahmi karto waxa aan ula jeeday.
Waxaan rajaynayaa in aan ka caawiyey milicsiga oo aan kobciyo dooda.
Milicsi aad u wanaagsan.
Gebi ahaanba ku raacsanahay.
Waxaan idinkaga tegayaa maqaal aad u muran badan oo ku saabsan pedophilia iyo xorriyatul qowlka (horay ayaan idiinka digayaa xitaa haddii aan burcad badeed ahay, qasab maahan inaan la wadaago booska Rick)
Waan ka xumahay inaanan horay kaaga soo jawaabin, laakiin waxaan ku qaatay maalintii oo dhan inaan isku dayo inaan furo furitaanka waxayna umuuqataa in goobta aan la gaari karin ... waxay u badan tahay inay tahay dhibaatooyinkeyga isku xirnaanta; Si kastaba ha noqotee, anigoo aan awoodin inaan akhriyo waxaad u jeeddo waxaan doonayaa inaan dib u milicsado iyada oo ku saleysan cinwaanka ku jira xiriirka.
Waxaan fahansanahay in fikradaha anshaxa ay isbedelayeen waqti ka dib, waxa dhacaya ayaa ah in arimahan gaarka ah, isbeddelku uu ahaa mid si tartiib tartiib ah ugu kordhayay da'da dadka si loogu tixgeliyo xiriirka galmada inuu yahay mid la isla oggol yahay; Haddii wax ka badan qarni ka hor 12-ka ama 13-jirka qaan-gaarka ah loo tixgeliyo "haweeney" ku habboon guurka, maanta saas kama aha dalal badan oo "ilbaxnimo leh" waxaanan halis ugu jiraa inaan adeegsado sifadan aan ogahay in lagu murmo. Nidaamkan dadka badankiisu way aqbaleen waxaanan aaminsanahay in loo qaadan karo nooc ka mid ah ilaalinta carruurta iyo dhallinyarada aan weli awood u lahayn inay go'aanno mas'uul ah naftooda gaaraan. Waxaan u maleynayaa in bulshada guud ahaan in la aqbalo isbedel ku yimaada booskan ay noqon doonto wax aan macquul aheyn.
Dhinaca kale, waxaan u maleynayaa in dambi-baarista dambiga ah fal-dambiyeedyada kale ay fursad u leedahay in lagu guuleysto mustaqbalka; Horay waa xaqiiqo in marijuana laga sharciyeeyay wadamada qaar ama gobolada qaarkood, sida khamriga qarnigii la soo dhaafay, laakiin la soco in kuwani ay yihiin dabeecado kaliya oo saameeya kuwa ku dhaqma, halka loo arko inay yihiin dambiilayaal kaliya waxay u adeegaan inay ku taajiraan maafiyada iyo kobcinta noocyada kale ee falalka dambiyeed.
Sikastaba, waxaa jira dhar badan oo halkaan lagu jarayo, hana ka walwalin, maskaxdayda kama soo wareegin inaad la wadaagto booska Rick-kan, sidoo kale waxaan ka tirsanahay kooxda kuwa jecel inay fikradaha kala duwanaan, gaar ahaan kuwaas oo u fekera si ka duwan, maxaa yeelay waa sida keliya ee lagu barto loona fahmo kuwa kale.
Sidee wanaagsan oo aad dhibaatada u qaadatay inaad qorto maqaalkan @Charlie, mahadsanid!
Hadda waxaan la wadaagayaa LUG si aan u arko haddii aan la xiriirno LUG-yada kale iyo ururada SL oo aan u gudbiyo qoraal rasmi ah Madaxtooyada, mid kalena NIC ugu dambeyntiina Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Cibaadada.
Waa wax lala yaabo in ay tahay Google, oo dhaqankeeda ku saabsan ixtiraamka asturnaanta isticmaaleyaashu shaki badan yahay, yaa ah kan fuliya dadaalka looga soo horjeedo qawaaniinta internetka ... laakiin kani waa UsemosLinux wuxuu leeyahay, waa loo qaadan karaa taas Gobolladu way xun yihiin oo marwalba waxay isku dayi doonaan inay ku xakameeyaan oo ku qasbaan, halka shirkaduhu ay wanaagsan yihiin oo dhaqankoodu had iyo jeer ku dayasho mudan yahay oo la ixtiraamo, taasna maahan, maxaa yeelay Gobolladu waxay leeyihiin xadka ay ku leeyihiin xuduudaha halka shirkadaha waaweyn ay ka shaqeeyaan adduunka. qofna nooma xaqiijiyo in shirkad caalami ah oo ku taal meel hegemonic maalin maalmaha ka mid ah aysan adeegsan doonin dhaqamada quudhsiga ah ee raadinta macaashka ugu badan qiime kasta. Dareenkan, adduun apocalyptic ayaa maskaxda ku haya taas oo dhammaan alaabada, isgaarsiinta, nolosha lafteeda, ay ku hoos jiraan kontaroolka shirkad weyn, sida Dallada ku jirta taxanaha 'Resident Evil saga' (in kasta oo aan lahayn zombies, dabcan xD), waanan ogahay in hadda ay tahay uun mala-awaal, laakiin qiyaasi khatarta ah in wax walba ay gacanta ku hayaan shirkado gaar loo leeyahay.
Google ma rabto inay furnaato webka maxaa yeelay waxay ka walaacsan yihiin arrimaha bulshada laakiin webka waa meheraddooda iyo hawada ay neefsadaan.
Jidka, iyo dhammaan eedeymaha loo soo jeedin karo shirkadda, xaqiiqadu waxay tahay inay yihiin Coca-Cola, Latte Shake ee shabaqa: waa wax cajaa'ib leh sida wanaagsan ee barnaamijkoodu u shaqeeyo ee ay ku siiyaan qof walba lacag la’aan iyo hadday ahaan lahayd Yahoo!, Weydiiso, Microsoft ama Altavista weli waxaan ku sii jiri lahayn da'da dhagxaanta webka.
Waan kugu raacsanahay, laakiin waxaan kuu sheegayaa wax kale, waa run in xiisaha Google sidoo kale uu yahay mid dhaqaale, laakiin shaqsiyan wax dhib ah igama galin ugu yaraan, haddii aysan jirin, weli waxaan la joogi doonnaa sanduuqyada boostada ee 250MB, oo marin looga heli karo shabakadda iyo bixinta wax kale, markaa hadii Google lacag ka helo kuwa xayeysiinta ah oo aysan ka soo bixin jeebkeena, soo dhawow, kiiskan danahaaga iyo kaayagu waa isku soo beegmayaan, markaa anigu wax khalad ah uma arko taas.
Aan aragno, sida Jack Ripper uu dhihi lahaa, waxaan u galaynaa qaybo:
Isbarbardhigga "horumarka" iyo "liberal" si toos ah ugama jeedo in dawladuhu xun yihiin oo shirkaduhu ay wanaagsan yihiin, ujeedku waa in dawladuhu ay yihiin (ama uguyaraanba) inay dammaanad qaadaan xorriyadaha muwaadiniinta oo ay dhisaan oo ay isla meel dhigaan xeerar u ah qof walba, halka ujeeddada shirkaduhu tahay inay abuuraan hanti (HAA, in kastoo qaar ka mid ah xusidda ereygan ay keento xanaaq). Uma maleynayo inuu jiro tusaale kafiican waxa lagu gaari karo hadaan "xeerar" dowladeed lahayn marka loo eego horumarka internetka laftiisa, runti ma ogi wax "libral" ah oo ka badan intarneedka iyo kobaca dhaqaalaha aduunka oo ku mahadsan. Si kastaba ha noqotee, in dawladuhu aysan fulin qaybtooda "qandaraaska" waa, in badan, mas'uuliyadda muwaadiniinta ee qaababka xun ee jira ee ku aaddan ku dhaqanka xuquuqdooda iyo sidoo kale, maxaa diidaya, damiir la'aanta iyo xiisaha Arrimahan, haddii wax la sharciyeeyo oo lagu beddelo qaab-dhismeedka UN-ka, waa sidaas.
Dhibaatada shirkaduhu waa inay u hogaansamaan sharciyada, oo ay dalbadaan oo ay dammaanad qaadaan waa dawladaha. Waxa la rabaa inay jiraan ayaa ah sharci dammaanad qaadaya, dhinac ka ah, "ciyaar wanaag" oo aakhirka ka wada faa'iideysata dhammaanteen iyo, dhinaca kale, in aan lagu xadgudbin xuquuqdeena shakhsiyan. Shirkaduhu inay ka faa'iideystaan ​​macluumaadkayaga ayaa mas'uul ka ah, mararka qaarkood, la'aanta sharci ku saabsan arrintan, maaddaama noloshu ka sarreyso sharciga mar walba qunyar socodka ah, dhinaca kalena sidoo kale waa mas'uuliyadda shakhsiyaadka naftooda ku riday gacanta shirkaduhu faahfaahinta ugu dambeysa noloshooda, iyagoo aan ka walwalin akhrinta shuruudaha isticmaalka gabi ahaanba. Xaqiiqda ah in adeeggu "bilaash yahay" nama qasbayo inaan isticmaalno, waan sameynaa maxaa yeelay waxaan dooranay inaan sidaas sameyno, xitaa markaan iska indhatirno cawaaqibka.
Dhinaca kale, cadaadiska dambiilayaasha adeegsada teknoolojiyada IT-da si ay u galaan dembiyadooda kuma xirna xeerarka sare ee hawlgalka shabakadda, waayo taasi waa ku filan tahay in hay'adaha u dhigma ay shaqadooda qabtaan. Xaqiiqdii, ku dhowaad dhammaan dowladaha waxay leeyihiin, gudahooda aalladooda booliska, kooxo u heellan dambiyada internetka, kuwaas oo, sida caadiga ah, iskaashi ka wada sameeyo midba midka kale, marka la eego sifooyinka caalamiga ah ee dambiyadan. Marar badan cilladaha arrintan la xiriira waxaa u sabab ah daldaloolo xagga sharciga ah oo ka jira sharciyada waddan kasta, ama isku xirnaan la'aanta hay'adaha, ama rabitaan la'aanta dowladdaha, looma baahna
Waxaan u arkaa wax aan ku faraxsaneyn in la soo jeediyo in joogtaynta internetka bilaashka ah ay doorbideyso in lagu soo rogo qaababka dhaqanka waqooyiga (wax kasta oo macnaheedu yahay), maadaama ay si sax ah u tahay internetka u oggolaanaya muuqaalka ifafaale dhaqameed illaa shalay ay iska indhatireen adduunka iyo kuwa ay warbaahintu iska indhatirtay dhaqameedku ma bixiyo caymis, dhanka kale, shaqsi ahaan, waxaan u maleynayaa in labada aag ee "woqooyi" iyo "koonfur" ay tahay kalimad kale oo aan lahayn aasaas, taas oo ay ugu wacan tahay tikniyoolajiyadda "woqooyi" maanta waxaan ku sii wadi karnaa dooddan "koonfurta" .
Xaaladda gaarka ah ee ICANN waa cawaaqibka soo ifbaxa iyo horumarka kadisga ah ee shabakadda, hadda, waxaan jeclaan lahaa qof inuu xuso xaqiiqo gaar ah taas oo go'aan ka gaarista arrimaha asaasiga ah ee ICANN ay wax yeeleysey iyada oo loo hoggaansamayo Waaxda ganacsi. Runtii macquul maahan aniga in aan qiyaaso wax ku oolka iyo hawlkarnimada hay'ad noocan oo kale ah iyada oo ay hoos imanayaan maamulka xafiisyada hay'adaha UN, oo runti, ay tahay in ay halkaas u joogaan inay dammaanad qaadaan heer caalami, iyo sidoo kale dowladaha heer qaran.
Fahamka xiriirka gaarka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo internetka ma sahlana, waxa ugu fudud ayaa ah in lagu celiyo fikradaha ku saleysan fikirka. Si aad sifiican uga fahanto mowduuca, waxaan kugula talinayaa inaad aqriso maqaal uu qoray joornaalist Jorge Ramos, inkasta oo la daabacay sanadkii 2005, hadana wuxuu u adeegaa inuu waxbadan ka muujiyo arimahan, halkan waa iskuxiraha: http://jorgeramos.com/el-dueno-de-la-internet/
Marka laga hadlayo isu-dhigma waxa loogu yeero burcad-badeednimada iyo dambiyada ay ka mid yihiin kufsiga, waxay iila muuqataa caqli xumo guud. Anigu waxaan ahay qof difaacaya xorriyadda inaan la wadaago aqoonta anigoo ubaahan horumarka aadanaha.Hadda, waxaan rumeysanahay inaan u nimid caqli xumadan saamaynta milkiilayaasha nuxurku ku leeyihiin dawladaha; Mareykanka, muusiga, filimka iyo telefishanada TV-ga, gudaha Isbaanishka SGAE oo aad caan u ah, iwm, taas oo mar kale muujineysa cilladaha dowladda inay tahay qaab xakamayn dhexdhexaad ah oo wax ku ool ah. Hadday dawladuhu u heellan yihiin inay hubiyaan u hoggaansanaanta sharciyada shirkadaha halkii ay ka ilaalin lahaayeen oo ay xakamayn lahaayeen muwaadiniintooda, qayb wanaagsan oo ka mid ah dhibaatada ayaa la xallin lahaa.
Iga raali noqo billetka, laakiin ma aanan dooneynin inaan joojiyo taabashada mid ka mid ah mowduucyada looga hadlay faallooyinka, taas oo aan aad ugu faraxsanahay, gaar ahaan maxaa yeelay waxay noo ogolaadeen inaan yeelanno dood ay tahay in qof walba dan u yeesho laakiin nasiib daro soo jiidata dad yar. Markaan tan arko waxaan marwalba xasuustaa weedh aan meel uun ka aqristo, 'xitaa kuwa aan siyaasada danaynayn waxaa lagu xukumay inay ku silcaan'.
Aad baad ugu mahadsantahay joojinta ...
Khaladaadka dawladahan markay timaado ogolaanshaha naftooda inay cadaadis ku saaraan lobbiisyada waaweyn waxay si sax ah ugu wacan yihiin danaha, muuqda ama aan ahayn, inay ku dhex leeyihiin shirkadaha lobbiesyadaas, markay iyagu si toos ah uga tirsanayn gudigooda agaasimayaasha. Kuwani waa sababaha heshiisyada wanaagsan iyo "gacanta-ku-dhaca" ee loogu sameeyo Isbayn ururada sida SGAE ama Mareykanka meelaha ay ku kulmaan adduunka shineemooyinka iyo muusigga. Waxaanan ka hadlaynaa dawladaha xorta ah, laakiin yaanan ilaawin in fikradooda xorriyadda ay ku saleysan tahay xorriyadda awoodda dhaqaale, xitaa ka sarraysa tan dadka naftooda, iyo inaan lagu soo rogin xaddidaadyo raasamaal badan.
Waa run waxa aad soo jeedinayso ee ku saabsan iskaashiga dawladaha iyo danaha kooxaha kor ku xusan, kuwaas oo aakhirka ka dhasha jimicsiga cilladaysan ee dimuqraadiyadda. Dhinaca kale, feker ahaanteyda, jiritaanka "xorriyadda ka timaadda awoodda dhaqaale" ee aad sheegtay waa cawaaqib toos ah oo xorriyadda dadka, jiritaanka internetku wuxuu caddeeynayaa tan, kuwii ilaa shalay ahaa hay'ado aan qiimo ku dhex lahayn nidaamka, laba arday oo fudud (abuuraha Google), ayaa maanta ka qaybgalayaasha ugu muhiimsan dib-u-habeynta mustaqbalka. Tan ma aysan gaarin siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha midkoodna fikradaha wax badan ballan qaaday.
Xaqiiqdii, xorriyadda dhaqaale waxay ka timaaddaa xorriyadda dadka. Dhibaatadu waxay tahay marka dad gaar ah ay ka faa'iideystaan ​​ilaa xad xorriyaddaas dhaqaale ee ay ku dambeeyaan inay noqdaan milkiileyaasha nidaam oo dhan oo ay bilaabaan inay adeegsadaan xeerar si ay u sii wadaan sii urursiga xoog iyo aad u badan, iyadoo durba ay ku kacayso xorriyadda iyo xuquuqda adduunka intiisa kale. dhimanaya. Waa la ogyahay in dadka qaar si ay wax badan u yeeshaan, in badan oo ka mid ahi ay yeeshaan wax aad u yar.
Waa run, Google waxay ku bilaabatay laba arday "oo aan qiimo lahayn" (runti ma jecli eraygaas, waxaan u maleynayaa in qof kastaa leeyahay qaybtiisa muhiimada), waxayna yaqaanaan sida loogu ciyaaro khiyaanadooda si ay u fuulaan jagooyinka iyagoo ka faa'iideysanaya howlaha nidaamka dhaqaalaha adduunka. Laakiin heerkaas, sheydu ma ahan injineernimo si fudud. Google si xawli ah ayey u korortay waxayna ka soo baxday mashruucii laba aragtiyood oo ay noqotay hay'ad caalami ah oo aad u weyn, in kasta oo baaxadda la gaadhay ay weli ku jirto gacanta koox yar oo dad ah. Waana halkaan, markii in yar ay xeerar ka codsadaan aqlabiyadda, markay dhaloocdo dimoqraadiyadda, iyo natiijada, jimicsiga cilladaysan.
Waxaan leeyahay kaliya iska jir shirkadaha.
«Waa la ogyahay in dadka qaar in badan, in badan ay qasab tahay inay wax aad u yar»… yimaadaan, runti?… Haddii aad waxyar ka barato aragtida dhaqaalaha, ma ahan buug-yare ama qoraallo, haddii aysan ahayn aragti dhaqaale oo run ah, waxaad arki doontaa taajirnimada iyo dhaqaalaha quruumaha MA aha wadar eber ah; Maalka waxaa lagu abuuray howlaha wax soo saarka, ha ahaado alaab, adeeg, iwm, marka qodobkaan anigu sii wadi maayo inaan faahfaahin ka bixiyo. Dhinacan gaarka ah, ee kobaca dhaqaalaha IT-ga iyo internetka, waxaan kugula talinayaa inaad aqriso maqaal dhowaan lagu daabacay Wired oo cinwaankeedu yahay Dunida Nerd. Waxaan Kaliya Halkan Ka Shaqeynaa (http://www.wired.com/business/2012/11/tech-trickle-down/) kaas oo qeexaya sida soo bixitaanka "nerds-yada" kuwaas oo hodanka ah ay u abuureyso shaqooyin, taas oo hal dhinac ama mid kale ay tahay dib-u-qeybinta hantida la abuuray, dhexdeeda waxaad sidoo kale ka heli doontaa xiriiriyeyaal kuwa kale isla mowduuca ah.
Marka la eego sadarka labaad, ma ogtahay mid "aragti" leh oo aakhirka ka sii badin doonin "aragtidiisa" inta kale ee dadka caadiga ah? Maxay labadan ku guuleysteen, ugu yaraan illaa iyo hadda, waxay gacan ka geysteen hagaajinta wax yar adduunkan, oo nasiib darro aan laga sheegi karin kuwa kale oo badan oo iyagu ku soo rogaya aragtidooda gaarka ah "aragtida" ay kaliya ka qayb qaateen inay wax ka sii daraan. Dhankeyga, waxaan ka baqayaa xafiisyada xafiisyada iyo xisbiyada in ka badan shirkadaha, waxay cadeeyeen inay dhibaato badan u leeyihiin aadanaha.
Dhamaanteen waxaan isku raacsanahay in INTARNETKA LAGU XUKUNO oo runtiina, waxaa horeyba loo nidaamiyay. Shuruuc in, mar labaad, waxaan DHAMMAAN ku raacsanahay, waa in la raadiyo ilaalinta xuquuqda dadka isticmaala internetka.
Si kastaba ha noqotee, xaddidaadda xeerarka hadda jira waxay asal ahaan ka soo jeedaan dabeecadda caalamiga ah ee internetka laftiisa iyo dabeecadda dhuleed ee awoodda Gobollada. Sida kaliya ee "looga hortagi karo" dhibaatadan waa iskaashiga caalamiga ah iyo saxiixa heshiisyada caalamiga ah.
Dareenkan, waxaa jira 2 sadar: mid soo jeedinaya in heshiisyada lagu gaaro qaab dhismeedka Qaramada Midoobay (oo loo maleynayo inuu yahay midka caalamiga ah ee ugu dimuqraadiyadda badan) iyo kuwa kale oo soo jeedinaya saxiixa heshiisyo dhinacyo badan leh (kiiska Heshiiska Budapest oo aan sheegay taasna waxaa dhiirrigelinaya Midowga Yurub, Mareykanka iyo Japan).
Aragtida "liberal" ee aad soo daliishatay - tusaale ahaan Vint Cerf's - aad bay ugu badan tahay Maraykanka. Waxay hore u sii dhigaysaa, sidaan idhi, in faragelinta dawladu ay tahay mid xun oo la canaanto. Si loo caddeeyo habkan fekerka, waxay tusaale u soo qaadanayaan "waaya-aragnimada xun" ee Cuba, Suuriya, Masar, Shiinaha, iyo wixii la mid ah. Dabcan, kuwani waa "faragalin dowladeed oo xun", taasoo sii xumeyneysa, sidaad ku doodeyso, xaqiiqda ah in gobolka loo maleynayo inuu u jiro danta guud ee muwaadiniinteeda. Si kastaba ha noqotee, qaabkan fekerka ah wuxuu ilaaway inay jiraan noocyo KALE oo faragelin dowladeed ah oo aan waxyeello kaliya geysanayn laakiin muhiim u ah hawlgalka internetka iyo xitaa difaaca xuquuqda muwaadiniintiisa.
Waxaa laga yaabaa inaan khaldanahay, laakiin waxaan u arkaa inaad ka soo horjeeddo nooc kasta oo "xeerarka caalamiga ah" ee internetka. Haa, kulligeen waan ka soo horjeednaa faaf-reebka dowladda Shiinaha; Haa, kulligeen waan ka soo horjeednaa in dowladda Cuba ay xaddido gelitaanka internetka. Si kastaba ha noqotee, haddii uu jiro "Qawaaniinta Internetka", waxaa lagama maarmaan ah in ay ahaato mid caalami ah dabeecadda Internetka oo keliya iyo "qaanuunka caalamiga ah" oo keliya ayaa lagu heshiin karaa Gobollada.
Tusaale ahaan, garsoorka Brazil ma uusan qaban karin Hackers Ruushka ah oo ka jabsada Shiinaha server-yada (kuwaas oo ku yaal Mareykanka) bangiga Isbaanishka ee muwaadin reer Brazil ah uu dhigey lacagtiisa. Waa ku filan tahay in tan lagu dhufto dhammaan akoonnada bangiga ee uu jabsaday khayaanada si loo ogaado baaxadda dhibaatada. Caddaaladdee ayaa awood u leh: midda waddanka ay ku sugan yihiin adeegeyaashu, midda jinsiyadda jabsadaha, tan waddanka laga soo maleegayo khiyaanada, tan jinsiyadda qofka ay saamaysay? Maxaa dhacaya haddii dambigaas aan laga soo saarin waddankaas ama aan la cusbooneysiin xeerarka lagu daro dambiyada kombiyuutarka? Oo sidaas ... kuwani waa laba cirif oo dhibaatada ah.
Qodob kale oo ka mid ah faalladaada ugu dambaysa waxay ila tahay aniga inay u qalanto fiiro gaar ah. Anigu ma dhihin "internet bilaash ah" (ka fakar: yaa ka xor ah? Way cadahay inay jirto aragti "diidmo" ah oo Gobolka ah aragtidan) waxay door bidaysaa in lagu soo rogo qaabab dhaqameedka woqooyiga. Waxa aan ula jeeday ayaa ah "loollankan" u dhexeeya Dawlad-goboleedyada si loo arko sida loo "nidaaminayo" Internet-ka inuu si cad u yahay halgan dano ah (oo ku kordhinaya danaha dawladaha xukunka haya laakiin sidoo kale kuwa shirkadaha ka jira dalkaas). Laba ka mid ah kuwa ugu fudud ee la aqoonsan karo waa dawladaha "keli-taliska ah" ee doonaya inay nidaamiyaan internetka si looga fogaado in la afgembiyo, iwm. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah waddamada dimuqraadiga ah ee leh "sumcadda" fiican ayaa sidoo kale doonaya inay nidaamiyaan internetka si macno darro ah - iyagoo doonaya inay ballaariyaan awoodaha dabagalka, xakamaynta iyo faaf-reebka. Kiiska caadiga ah waa Mareykanka, oo xitaa maanta leh sharci GESTAPO ah oo u oggolaanaya dowladda inay la socoto internetka oo keliya laakiin nidaamka isgaarsiinta oo dhan ee waddankaas. Waxaan kugula talinayaa inaad aqriso Sharciga Wadaniyada USA.
Sharciga USA-Patriot wuxuu ka kooban yahay qodobbo badan oo qarxiya tiro ka mid ah xuquuqda madaniga ah iyo xorriyadaha la dejiyey. Qaar badan oo ka mid ah qodobada sharciga ayaa ah kuwa aan dastuurka waafaqsaneyn, yareynaya isu dheelitirka awooda ee hay'adaha kala duwan ee dowladda, waxaana awoodaas looga wareejinayaa maxkamadaha cadaaladda ciidamada amniga.
ICANN ayaa maanta joogta dalkaas.
Si la mid ah, waxaa jira kuwa kor u qaadaya Budapest Convention. Waa heshiis caalami ah (oo kuwa go'aansada inay u hoggaansamaan aan wax ka beddeli karin - aan u maleyno in xubnihii asalka ahaa ay yihiin Yurub, Mareykanka iyo Japan) oo isku dhafan taxane ah "dambiyada kombiyuutarka", oo ay ka mid tahay astaanta aqoonsiga oo keliya, khiyaano, iwm laakiin sidoo kale "dambiyada hantida aqooneed." Si sax ah, dalalkan waxay raadinayaan inay qariyaan difaaca danahooda - aqri, danaha shirkadaha wadamadaas ee laxiriira xuquuqda "xuquuqda" - iyadoo lagu hoos jiro khiyaali ah la dagaalanka dambiyada kale oo ay jirto is afgarad weyn oo lagula dagaalamayo (pedophilia , khiyaano, iwm.).
Waa in aan la iloobin in macnaha guud ee aaladda 'waqooyiga dhaqanka' (filimada noocee ah aad u daawataa shineemada? Waa maxay muusikada aad dhagaysanayso? Buuggee ayaad akhridaa? Sidee u labisataa?), Gaar ahaan Waqooyiga Ameerika, «difaaca hantida" caqli ahaan "waxay ku tusaysaa ficil ahaan difaaca danaha dalalkaas.
Dhibaatadani waxay socotaa dooda oo dhan "xeerka internetka."
Waad aragtaa, ma jiraan awliyo arrintan ku jirta: Ruushka ama Shiinaha midkoodna ma raadsado "sharciyeyn" aan waxba galabsan; ma aha Mareykanka ama Yurub.
Su'aasha adag ee wali kujirta dhuunta ayaa ah: hadii qawaaniintu ay lama huraan tahay oo sida kaliya ee lagu gaari karo qawaaniintaan ay tahay iskaashi iyo heshiisyo caalami ah, noocee faragalinta ay tahay inay dalalkeenu difaacaan (waan hadlayaa, tusaale ahaan , ka yimid Latin America)?
Iga raali noqo inaan kaa hor imaado, laakiin waxaa iska cad in "Dhamaanteen kuma wada raacsaneyn in Internetka WAA IN LA SAMEEYO", waxa runta u noqda ayaa ah inay jiraan dad badan oo daneynaya nidaaminta internetka, oo aan isku mid aheyn. Marka loo eego in la geliyo gacanta UN, ma isla UN-kii ayaa, dhawr sano ka hor, Libya u timid inay gudoomiso Golaha Xuquuqda Aadanaha? Hadday saas tahay, waxaan ku leeyahay: waad mahadsan tahay, laakiin maya ...
Eeg, dhammaan tusaalooyinka aad gelisay dambiyada laga galay shabakadda iyo kuwa kaloo badan, waxay awood u leeyihiin in lagu xalliyo qaababka hadda la dejiyay iyo iyadoo lala kaashanayo hay'adaha sharci fulinta, waxaa jira tusaalooyin badan oo suurtagal ah, dabcan tan waa lagu guuleystay marka ay dhacdo isku dhac u dhexeeya sharciyada waddamada ku lug leh kala saarista fal dambiyeedka, sida ku dhacday burburintii shabakadihii ku xirnaa kufsiga, kuwaas oo ka dhigay wararka wargeysyada oo aad xaqiiqdii marin u heshay; Hadda, maxaa ku dhacaya dambiyada intiisa kale? Hagaag, laba shay, in aysan jirin wax ku soo beegay kala-soocidda ama aysan jirin wax rabitaan ah oo ka imanaya gobollada inay iskaashi yeeshaan. Xaalada kala soocida ficil ahaan dambi, waxaan ku leenahay tusaalaha ugu halista badan ee ku saabsan xuquuqda lahaanshaha hantida aqooneed iyo "burcad badeed", halkaas ayay damacsan yihiin inay nidaamiyaan kuna soo rogaan kala soocida ku xadgudubka hantida aqooneed inay dambi u tahay cabbiraan danaha kooxaha daneynaya ilaalinta iyo kordhinta xadka. Waxaan rajeynayaa in arrintan aan ku heshiinay in ka-habeynta internetka dhismayaashaasi ay waxyeello u geysan doonto inta badan isticmaaleyaasha.
Dhinaca kale, qayb wanaagsan oo ka mid ah dambiyada kombiyuutarka ee la xiriira xatooyada aqoonsiga iyo lambarrada kaararka bangiga waxaa hadda gacanta ku haya maafiyada, qayb wanaagsan oo ka mid ah oo saldhiggoodu yahay Bariga Yurub, halkaas oo ay ku raaxaystaan ​​ciqaab la'aan, sharci xumo awgeed. ama si fudud loogu xisaabtamo ilaalinta qarsoodiga ah ee hay'adaha sharci fulinta ee wadamadaas, marar badan ayaa mashquul ku ah la socoshada saxafiyiinta aan ku qanacsaneyn dowladda iyo muwaadiniinta fudud ee aan waafaqsaneyn.
Waad ku mahadsantahay talo soo jeedinta ah inaad ii aqriso Sharciga Wadaniyada, sida ugu dhaqsiyaha badan markaan helo waqti ayaan fiirin doonaa markale, maxaa yeelay horey waan u aqriyay markii la shaaciyay waqti hore haa haa, waa run oo waxay ka hor imaaneysaa xuquuqda iyo xorriyadaha aas aasan, laakiin mowduucan wali wey ku sugan yihiin Tiro wanaagsan oo racfaan ah ayaa ka socda maxkamadaha taas oo ay soo gudbiyeen muwaadiniinta caadiga ah ama ururada arimahan ku lugta leh oo ilaa iyo hada aysan jirin cadeyn adag. Arintaan, waxaan dhamaanteen jecelnahay inaan cabirno ra'yigeena oo aan dhaleeceyno deriska "raaxo la'aanta ah" ee woqooyiga, annaga oo aan tixgelinaynin in marar badan, sharciyadayada "koonfurta" ay yihiin kuwo aan macquul ahayn oo wax u dhimaya xorriyadaha madaniga ah, laakiin dabcan, hadday yihiin "kuwayaga" "macno malahan.
Faalladaadu waxay ka kooban tahay bayaan xoogaa khilaafsan ruuxa guud ee faallooyinka, sidaad u leedahay “Sidaad u aragto, ma jiraan dad quduusiin ah oo arrintan ku jira: Ruushka iyo Shiinaha midkoodna ma doonayo 'sharci' aan dambi lahayn; Sidoo kale Mareykanka ama Yurub ", haddaba, ma waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in QOFkasta oo daneynaya maamul u sameynta internetka uu leeyahay dano khaldan? Hadday sidaas tahay, markaa sharci looma baahna.
Waxaan u maleynayaa in haddii waddamadeennu ay tahay inay wax difaacaan, sida aad adigu leedahay, waa inay ka dhigto internet-ka qof walba fursad loo siinayo, iyadoo aan la xaddidneyn, loona adeegsado ilaha iyo dadaalka lagu xakameynayo si loo xalliyo dhibaatooyinka kale ee inagu sii kordhaya, sida dib u dhaca tikniyoolajiyadda, sharciyada qarnigii sagaalaad Amni darrada muwaadiniinta iyo wax aad u dheer iwm ayaa weli sii jira, taas oo ah mas'uuliyaddayada iyo cid kale toona, in la joojiyo dareemidda sida "dhibaneyaasha" qof markiiba isla markaana aan qaadno mas'uuliyadeenna.
Aadna waad ugu mahadsantahay kaqeybgalka doodan, runtii waan sameeyaa ...
Haha! Waad ku mahadsantahay inaad u maleyneyso inaan difaacayo qawaaniinta internetka ee UN. Weligay sidan oo kale maan odhan.
Marka labaad, run maahan in Shiinaha, Ruushka, Mareykanka iyo Yurub ay dhammaantood yihiin. Ma aqaan halka aad ku nooshahay, waxaan ku noolahay meel kale oo adduunka ka mid ah. Waa dareenkan aan uga tagay sadarka ugu dambeeya ee u furan milicsiga. Mawqif noocee ah ayay waddamadeennu qaadan karaan?
Dareenkan, waxaan si buuxda ugu raacsanahay waxa aad soo jeedineyso sadarka ugu dambeeya: «In laga dhigo internetka qof walba, xayiraad la'aan, iyo in la isticmaalo ilaha iyo dadaalka lagu xakameynayo si loo xalliyo dhibaatooyinka kale ee culeyska nagu haya, sida tikniyoolajiyadda dib-u-dhac, sharciyadii qarnigii sagaal iyo tobnaad oo weli badbaadaya, amni-darrada muwaadinka iyo iwm oo aad u dheer oo waa masuuliyadeena iyo cid kale toona, in la joojiyo dareemidda sida “dhibaneyaasha” qof markiiba isla markaana aan u qaadanno mas'uuliyadeenna. »
Waxaan u maleynayaa in khilaafkeena ugu weyn uu yahay qodobkaan: Qawaaniinta internetka ma ahan xulasho. Faallooyinkaagii hore adigu laftaadu waxay yiraahdeen INTAASI HORE AYAA JIRA. Internetka HORTA ayaa loo nidaamiyaa. Dhibaatadu waxay tahay inaan u soconno dhanka XUN. Waxyaabaha kale, danaha aan ku tilmaamay.
Soo jeedintaydu waxay ku dadaalaysaa inay abuurto boos saddexaad. Si fudud taas. Haddii aad rabto inaad ku noolaato adduunyo riyadeed, oo "Internetku xor yahay", si fiican (aragtidayda) waad wareersan tahay. Maaha wax aan jirin inay jiraan dawlado si joogto ah ugu xadgudba xuquuqda dadka isticmaala (kiisaska ugu cadcad waa Cuba, Shiinaha, Ruushka, laakiin sidoo kale Mareykanka, iwm.), Iyo shirkadaha leh awoodda adduunka xitaa mararka qaarkood kuwa ka weyn kuwa dalal badan. (Google, Microsoft, iwm) oo waliba ku xadgudbay qaar badan oo ka mid ah xuquuqdaas.
Haddii aad rabto inaad raacdo soo jeedinta Google, horay u soco. Kuma qancin "daacadnimadiisa". Waan ka xumahay.
Waan ka xumahay haddii aanan ku fahmin, laakiin saddexda sadar ee ugu horreysa ee faallooyinkaagii hore, oo ku soo baxay naanaysta "Pablo", si sax ah u dhah taasi, ama ugu yaraan noo oggolow inaan tarjunno, maxaa yeelay noqoshadaada fikraddaada waxaan u malaynayaa inay muujineyso fikirkaaga, haddii aysan ahayn Hagaag, waa hagaag, waxaan idhi.
Dhinaca kale, halkee ka idhaahdaa internetka HORTA ayaa la xukumayaa? Xaqiiqda ah in waddan kasta ay ka jiraan sharciyo ama qawaaniin arrintan khuseeya sinnaba ugama turjumayso in internetka, shabakaddu, iyadoo ifafaale caalami ah la nidaamiyay. . Iyo maya, sinaba uguma noola "adduunyo riyadeed" in kasta oo AAN KA fiirsanayo in internetku xor yahay, macno ahaan malaha "dowlad" maamusha oo faafreeb ku sameeya adduunka. Si aan shaki uga jirin booskeyga: Waxaan doorbidayaa internetka "halista ah" iyo "bilaashka ah" sida kan maanta jira halkii aan ka heli lahaa "amni" iyo "nidaamsan" midba qof kale, ha ahaato UN-ka, oo leh maahmaahdeeda karti la'aanta iyo xafiis-dowladeed xad-dhaaf ah ama koox "wakiillo dimoqraadi ah oo aan danayn oo aan eex lahayn" urur kasta, diin ama u janjeera siyaasad. Haddii hadaladani ay iila muuqdaan "siyaasad ahaan khalad" macno malahan, anigu runti waan ahay.
Haa, waan oggolahay soo-jeedinta Google, haddii aadan sameyn, ma sameynaysid, waxaad leedahay xuquuq kasta, uma malaynayo inay dadka kale u maleeyaan una dhaqmaan sida aniga oo kale; adduunku wuxuu noqon lahaa mid aad u caajis badan, taas oo ah, waxaan kugula talinayaa inaad ku qiimeyso soo-jeedinta waxa ay ka kooban tahay halkii aad ka sameyn lahayd cidda sameysa, xusuusnow weedha Albert Camus oo si wanaagsan u khuseysa kiiskan: «Qofna ma go'aansado waxa fekerku dhab ahaantii tixgelinayo haddii midig ama bidix »
Marka laga hadlayo wadanka aan ku noolahay, wali ma awoodi kari weyday inaad qiyaasi karto? Kaalay, waa AAD fududahay in la sameeyo ... iyo MAYA, dabcan ma ahan Mareykanka, sidee uga fikiri kartaa? 😉
In kasta oo aan idinku raacsanahay dhammaantiin, haddana waxaa jira wax ay tahay inaan tixgelinno marka horeba. Maaddaama internetku uusan lahayn milkiile laftiisa, macluumaadka loo qaybiyay oo lagu kaydiyay noodhadhka kala duwan ayaa la keydiyaa in muddo ah ka dibna la nadiifiyo. Macluumaadkan waxaa jira oo ay u isticmaali karaan wakiilo kala duwan oo dawladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay hawlo kala duwan oo ka mid ah sharciyada u dhigma waddan kasta iyo borotokollada ay saxeexaan. Waxyaabaha kor ku xusan waxay bixiyaan qalab yeelan kara adeegsiyo kala duwan tanina waxay noqon kartaa dhibaato iyadoo kuxiran optics-ka laga bilaabo xilliga la arko.
Xorriyadda waxaa badanaa lagu jahwareeraa dhaqan xumo, laakiin sida aalad kasta waxaa loo isticmaali karaa wanaag iyo xumaan labadaba. Qawaaniintu waa macquul haddii ay tahay oo kaliya haddii aysan dhaafsiisneyn in la xadido waxa la qaban karo iyo waxa aan la qaban karin. Tan dambe waa xorriyad aasaasi ah oo aan gorgortan laga geli karin, sidoo kale waa wax horeyba loogu qeexay sharci kasta, si aad adigu laf ahaantaada ula socoto haddii aad dembi gasho.
Aad ufiican u fiirsashadaada. Marka laga hadlayo tan hore, inkasta oo aanan si buuxda kuugu raacsanayn in internet-ka "uusan lahayn milkiile", waxaan aad uga warqabaa in dhammaan qoraaladayada daalacashada ay ku kaydsan yihiin, hal dhinac ama mid kale, qaybaha kala duwan ee ay u gudbiyaan macluumaadka, sidaa darteedna, marka la joogo wakiilada kala duwan ee aad sheegaysid, taasoo si kasta oo ay tahay qiimo lagu bixinayo isku xirnaanta aan ku raaxeysanayno, iyo HAA, waa run inay tahay qatar, laakiin loo kala doorto halista oo ay wakiil ka tahay adeegsi shirkadeed iyo mid ay dowlad siin karto, waxaan doorbidaa inaan qatarta la galo tan koowaad.
Dhanka kale, waxaan fahansanahay in markaad kahadasho "dhaqanxumo" inaad ula jeedo ficillo aakhirka noqonaya dambiyo, runtiina had iyo goorba HORUNA waxaa matalaya sharciyada waddamada badankood, iyadoon loo eegin tiknoolajiyadda loo adeegsado inay ku kacaan; Aan sharaxaad ka bixiyo, pedophilia waxay ka horraysaa soo bixitaanka internetka sido kale xatooyada aqoonsiga, waxa dhaca ayaa ah iyadoo IT-ga la adeegsanayo, hababka loo galiyo iyaga ayaa ah "fududeyn". Halkii laga dhisi lahaa xayiraadaha iyo xakamaynta shabakada, waxay umuuqataa mid wax ku ool ah wakaaladaha booliska si ay u cusbooneysiiyaan ficiladooda iyadoo la raacayo horumarinta tikniyoolajiyadda iyo in la xukumo dambiilaha oo aan loo tixgalin dhammaan dadka isticmaala shabakadaha inay ka shakisan yihiin xaqiiqda kaliya ee helitaankeeda. Halkan, marka la kala doorto khataraha xorriyadda sida qaldan loo tarjumay iyo xakameynta internetka, shaki la’aan waxaan door bidaa halista xorriyadda, maxaa yeelay sida Manuel Azaña u yiri «Xorriyadda ragga kama farxiso, waxay si fudud uga dhigeysaa rag».
Si buuxda ayaan kugu raacsanahay, waxaan u maleynayaa inay macquul tahay wakaaladaha dabagalka sida booliska inay la qabsadaan xaaladaha teknolojiyadda marka loo eego dhinaca kale.
Xakamayntaani ma waxay noo horseedi doontaa dawladaha hantiwadaagga?
Ku jawaab Antonia
Ku abuur 'Cyber ​​Café' kharash la'aan GNU / Linux